TV-Series - Myanmar Asian TV
The Fiery Priest ( 2019 )
ဒီတစ်ခါမှာတော့ SBS ရုပ်သံကနေFebruary 15ရက်ကစပြီး အပတ်စဉ် သောကြာ စနေ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့The Fiery Priest ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် မင်းသားကိုကြိုက်တာနဲ့ကြည့်ကြည့်တော့ ဇာတ်လမ်းလေးလည်းကောင်းတာကြောင့် ဘယ်ကမှတင်တာမတွေ့တာနဲ့ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ Kim Nam Gil,Lee Ha Nee,Kim Sung Kyun နဲ့ Keum Sae Rok တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် မတရားတာတွေ့ရင် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုမနေနိုင်ဘဲ ဝင်ပါတတ်တဲ့…
Babel ( 2018 )
2019 ခုနှစ် January လမှာ စတင်ပြီးထုတ်လွှင်ခဲ့ကာ TV Chosun ရုပ်သံလိုင်းမှာ ပြသဆဲဖြစ်တဲ့ Babel လို့ အမည်ရတဲ့ Korea Drama တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … Crime Drama Mystery ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး မင်းသား Park Si-hoo, Kim Ji-hoon တို့နှင့်အတူ မင်းသမီး Jang Hee-jin…
A Gentleman’s Dignity ( 2012 )
ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ရိုးအီလာကြတယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် အသက် 40 အရွယ် လူပျိုကြီးတို့ရဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကို ရသအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ခံစားလို့ရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2012 ခုနှစ်ထဲက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Korean Comedy Series လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် … Main Cast တွေအနေနဲ့ Jang Dong-Gun, Kim…
The Light in Your Eyes ( 2019 )
JTBC ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပြီး အပိုင်း ၁၆ ပိုင်း ပါဝင်မယ့် Fantasy Romance ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် … Nam Joo-hyuk ရဲ့ main cast အနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ တတိယမြောက် ဒရာမာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ဒရာမာဖြစ်တဲ့ The Bride of Habaek ကတော့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီး ရလာဒ်ဆိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်…
That Man Oh Soo ( 2018 )
That Man Oh Soo (2018) မြန်​မာစာတန်းထိုး ???????????????? OCN ရုပ်သံကနေ March လ 5ရက်နေ့ကနေစတင် ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာပြသမဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာဆိုရင် အပိုင်းပေါင်း ၁၆ပိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့ Fantasy, Romance Comedy ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ Lee Jong Hyun (CNBLUE)…
Touch Your Heart ( 2019 )
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Goblin ထဲက မင်းသား Dong Wook နဲ့ Yoo In Na ရဲ့ Ro တဲ့ကားလေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်…. ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ Yoon Seo ( Yoo In Na ) က လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်… သူအနေနဲ့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်…
The Vampire Diaries : Season2( 2010 )
ကဲ … The Vampire Diaries Season2လေးကို ပြန်စပါပြီနော် … ဇာတ်လမ်းကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေသူများအတွက် နည်းနည်းပြန်နွှေးပေးပါ့မယ် … Season 1 Episode 22 ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ Katherine ရောက်လာပြီး John Gilbert ရဲ့ သဘာဝလွန် အန္တရာယ်တွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ မှော်လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ လက်ကိုဖြတ်ပြီး သတ်မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ…
မနေ့ညကတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း မနေ့ကထိထွက်ထားသမျှအပိုင်းအားလုံးတင်ပေးလိုက်ပြီနော် ကဲကဲ…Downပြီးအားပေးရမှာ MMATV Fansတွေရဲ့တာဝန်နော် ??? အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသာပတေးနေ့ SBS ရုပ်သံလိုင်းတွင်ပြသလျှက်ရှိသောOngoing ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ် တပတ်တွင် ၄ပိုင်းပြသလျက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ၄၈ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ သက်ဦးဆံပိုင်ခေါင်းဆောင်သည့်အစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလ အိုဆွန်းနီဟာ ထက်မြက်ပြီးကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိတဲ့ တေးသရုပ်ဖော် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက် မင်းကြီးလီဟော့နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရတယ် မချစ်ပဲနဲ့သူရဲ့ပြစ်မှူကိုဖုံးကွယ်ချင်လို့…
Wolf ( 2019 )
ဒီတစ်ခါseriesလေးကတော့ GMM One နဲ့Line Tv တို့မှာအပတ်စဉ်သောကြာနေ့တိုင်း တစ်ပတ်ကိုတစ်ပိုင်း ထုတ်လွှင့်နေလျက်ရှိတဲ့ Wolfဆိုတဲ့ Thai seriesလေးပါ စုစုပေါင်း ၁၃ပိုင်းပါဝင်ပြီး My Dramalist 7.6/10ထိရရှိထားပါတယ် ဒီကားလေးကမှာဆို လူငယ် ၅ယောက်က Wolf ဆိုတဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်မိသွားတဲ့ အကြောင်းလေးပါ တစ်နေ့မှာ လူငယ် ၅ယောက်စီကို ထူးဆန်းတဲ့ ဖုန်းဝင်လာပြီး သူတို့ကို…
Emperors and Me ( 2019 )
Also known as: The Emperor arrives လော့ရှီးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဝတ္ထုကမ္ဘာထဲကို time travle လုပ်နိုင်တဲ့သူပါ တစ်နေ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖြောင်းဖျရာက တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး သူ့ကို လှမ်းဆွဲတဲ့ တခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပါ ဝတ္ထုကမ္ဘာထဲ ခေါ်မိသွားပါတယ် နောက်တော့ ဝတ္ထုကမ္ဘာကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူခေါ်လာတဲ့သူက သူ့သူငယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲ ဝတ္ထုကမ္ဘာထဲက ဘုရင် ဖြစ်နေတဲ့အခါ… သူ့သူငယ်ချင်းကို…
Genre: Action & Adventure, Comedy, Fantasy, Friendshhip, Romance
ဒီတစ်ခါ mini seriesလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Drunk in good tasteဆိုတဲ့ seriesလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် စုစုပေါင်း ၂ပိုင်းပါပေမယ့် အပိုင်းခွဲလေးတွေအနေနဲ့ထွက်ရှိလာပါတယ် Castsတွေကတော့ Along with the god ထဲက ချစ်စရာမင်းသမီးလေး Kim Hyang Gi နဲ့ Rich Family’s son,Just between lovers,Let’s eat3တို့မှာပါဝင်ထားတဲ့…
Kingdom : Season 1 ( 2019 )
ဒီနှစ်တွေထဲမှာ ကိုရီးယား zombie ဇာတ်ကားတွေ အတော်လေး ရေပန်းစားတယ်ပြောရမယ် … ထွက်လာခဲ့သမျှ Train to Busan တို့ Rampant တို့လို ဇာတ်ကားတွေကလဲ ပရိသတ်တွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ် … movie နဲ့ အားမရတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းကတော့ မနေ့ကပဲ အပိုင်း ၆ ပိုင်း ပါဝင်တဲ့ ကိုရီးယား zombie စီးရီးကို…
Best Chicken ( 2019 )
အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် K drama ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2019 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့onging ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘The Best Chicken’ ဆိုတဲ့ seriesလေးပါ Main Cast တွေကတော့- Park Sun Hoနှင့်Kim So Hyeတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ရည်ရွယ်ချက်အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ဆို်င်ဖွင့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ပတ်ချွဲဂို (Park Sun Ho) ကာတွန်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆောဘိုအာ (Kim So Hye)…
Coffee, Do MeaFavor ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Korea Fantasy Romantic-Comedy ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … နာမည်လေးကတော့ Coffee, Do Me A Favor လို့ အမည်ရပါတယ် … 55 မိနစ်စာ အပိုင်း ၁၂ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ ၁၂ ပိုင်းလုံး ထုတ်လွှင့်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ……
W: Two Worlds ( 2016 )
ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် W – Two World ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ Main Actor အဖြစ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် Lee Jong-suk က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ Main Actress အနေနဲ့ကတော့ Han Hyo-joo က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားဟာဖြင့် မထွက်ရှိသေခင်ကပင် Doctors…
Our Skyy ( 2018 )
Love is love. Love has no gender. Our skyy မှာ အပိုင်း ၅ ပိုင်းရှိပါတယ်​ … အတွဲ ၁တွဲချင်းစီအတွက်​ တစ်​ပိုင်းပါ .. BL ကားဆို​တော့ အတွဲ​တွေအားလုံးကလည်း ​ယောက်ျား​လေး​တွေချည်းပါပဲ … အပိုင်း ၁. Our skyy PickRome အပိုင်း ၂.Innsun…
Genre: Drama, LGBT, Romance
SOTUS The Series ( 2016 )
Normal ကား​တွေပဲကြည့်​ရတာ ညည်းညူး​နေတဲ့ ပရိသတ်​ကြီးအတွက်​ BL series ​လေး တင်​​ဆက်ပေးပါရ​စေ …. ဒီကား​လေးဟာဆိုရင်​ 2016 ခုနှစ်​ကတည်းက ထွက်​ရှိခဲ့ပြီး အစက​တော့ ထပ်​ရိုက်​ဖို့ စိတ်​ကူးမရှိ​ပေမယ့်​ အခု​တော့ BL ချစ်​ပရိသတ်​​တွေရဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​​ကြောင့် နောက်​ထပ်​ season2ကို ဆက်​လက်​ပြီး ရိုက်​ကူးခဲ့ပါတယ် .. ဇာတ်​လမ်းလေးအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင် – SOTUS…
အခု MMATV channel ပရိတ်​သတ်​ကြီးအတွက်​တင်​ဆက်​​ပေးမယ့်​chinese drama ​လေးက​တော့ 2018 on going series ​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ တရုတ်​ web drama ဖြစ်​တဲ့ Yan Sheng ဆိုတဲ့ novel ​လေးကိုအသက်​သွင်းထားတာဖြစ်​ပါတယ်​​နော်​ ​​ကျောင်းသားဘဝramanticလူငယ်​ဆန်​​ဆန်​အချစ်​ဇာတ်​လမ်း​​​လေးဖြစ်​လို့အကြိုက်​​တွေ့ကြမှာပါ ဇာတ်​လမ်းပုံစံ​လေးက 1996 ခုနှစ်​က​ကျောင်းသားဘဝပုံရိပ်​​တွေကိုပြန်​လည်​အသက်​သွင်းထားတဲ့ ​ကျောင်းသားဘဝအပြိုင်​အဆိုင်​​လေး​တွေကိုရိုက်​ကူးထားပါတယ်​ ရန်​ရှီး(Wan Peng )ဟာ ဟွာ​ပျောင်း(Hou…
Life on Mars ( 2018 )
2018 ခုနှစ် June လထဲမှာ OCN ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Korea Crime , Fantasy , Drama , Science Fiction ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … အခုခေတ်က စုံထောက်ခေတ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော် … အသစ်ထွက်တဲ့ KDrama တိုင်းက စုံထောက်ကားကြီးပဲ … ဒီကားလေးကတော့ 2006…
Love O2O ( 2016 )
2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များပြားခဲ့တဲ့ Love O2O ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အခုချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်နေရတဲ့ Yang Yang ကို လူသိများလာစေတဲ့ ပထမဆုံးသော ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေး ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ – ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို…
YOU : Season 1 ( 2018 )
သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ Psychology Thriller လည်းဖြစ် Crime Faction တစ်ခုလည်း ဖြစ်တဲ့ 2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အပိုင်း (၁၀) ပိုင်း ပါဝင်တဲ့ YOU ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ် … YOU ဟာ စာရေးဆရာမ Caroline Kepnes ရဲ့အရောင်းရဆုံး နာမည်တူ စာအုပ်ကို series အဖြစ်…
Memories of the Alhambra ( 2018 )
Memories of the Alhambra ( 2018 ) ************************************************ ဒီကားလေးထဲမှာတော့ Main Actor နဲ့ Main Actress ကတော့ Hyun-Bin နဲ့ Park Shin-Hye ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. Park Chanyeol ( Exo ) နဲ့ Han Bo-Reum တို့က…
Genre: Action & Adventure, Drama, Fantasy
Royal Highness ( 2018 )
Royal Highness2018ခုနှစ်ထွက် တရုတ်နန်းတွင်းသိုင်းကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ Ratingမှာလည်း My Dramalist 8.0ထိရရှိထားပါတယ် Main Castsတွေကတော့ Scarlet heart2,Xuan-Yuan Sword,Legend of Nine Tails fox,ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ ”Jiang Jin Fu” Ever night,Fly in sky,The legend of Flying Daggers,The Mystic…
Genre: Historical, polotical, Romance, War
Insatiable : Season 1 ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Netflix ရဲ့ web tv series လေး တစ်ခုပါ … စုစုပေါင်း အပိုင်း (၁၂) ပိုင်း ပါဝင်ပြီးတော့ မထွက်ခင်က အတော်လေး hot ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမယ့် tv series လေး တစ်ခုပေါ့ … ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် – Patty…
Clean With Passion For Now ( 2018 )
Kim Yo Jungဆိုရင်တော့လူတိုင်းသိကြမှာပဲနော်ပရိတ်သတ်အချစ်တော်မင်းသမီးလေးလေ Moonlight light draws by cloudsရိုက်ကူးပြီးနောက် အခုဒီကားလေးနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Yo Jungလေးပါဝင်ထားတဲ့ Ongoingလေးပါ “Clean With Passion For Now”(အသန့်ကြိုက်တဲ့ကိုကို) ဟာရောဂါပိုးအကြောက်လွန်ရောဂါရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေကိုသိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့ကောင်မလေးကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ရောဂါပိုးတွေကိုအရမ်းမုန်းပြီးအရမ်းအသန့်ကြိုက်လွန်းတဲ့ သန့်ရှင်းရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးချောချောလေး ဂျန်ဆွန်းဂူး ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ညစ်ပတ်ဖို့လုံးဝဝန်မလေးတဲ့ ဂီအိုဆိုးတို့တွေ့တဲ့အခါ ကောင်လေးရဲ့ရောဂါပိုးအကြောက်လွန်ရောဂါကို ကောင်မလေးကဘယ်လိုကူညီဖြေရှင်းပေးမလဲ။ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာMMATVChannelကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါနော်။…
The Universe’s Star ( 2017 )
အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2017 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ The Universe’s Star ” လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ … ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို Splash Splash Love ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒါရိုက်တာ Kim Ji Hyun ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Mini Dramaလေးပါ ……
Secret Queen Makers ( 2018 )
Queenmakers-2018 ဒီ web drama series လေးက 2018 မှာထွက်ရှိခဲ့ပီး အပိုင်း ၇ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် Ahn Gongju ဟာ tour guide တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရုပ်ရည်ဟာမလှဘူးဆိုပြီး သိမ်ငယ်နေတတ်တဲ့သူပါ ဘယ်သူကမှလည်း သူ့ကိုအရေးတယူမလုပ်ကြတဲ့အပြင် လှောင်ပြောင်ခြင်းပါခံနေရတဲ့သူတစ်ဦးပါ အဲ့လိုနဲ့ guide လုပ်ရင်း duty free shop ကိုရောက်သွားတဲ့အခါ သူ့ကိုပြောင်းလဲပေးမယ့်…
The Vampire Diaries : Season 1 ( 2009 )
43 min min
ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်ကြတဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေလိုမျိုး The CW ကလဲ vampire တွေ , werewolf တွေ , စုန်းတွေနဲ့အတူ တခြား သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ creature တွေပါဝင်တဲ့ supernatural universe ကို 2010 ခုနှစ်မှာ The Vampire Diaries နဲ့ အစချီပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် … 2013…
Maniac Season 1 ( 2018 )
2018 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Netflix Series လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ TV Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Espen LA Lervaag ရုပ်ရှင်အပေါ်ကို မှီငြမ်းထားပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေမှုပုံစံ သုံးဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် မိမိအတိတ်ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို ပြန်လည်ရင်မဆိုင်လိုပေမယ့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချိတ်အဆက်မိတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်များကို စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်နဲ့ ကြည့်ရမယ်…
Legacies : Season 1 ( 2018 )
2009 ခုနှစ်စတင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ The Vampire Diaries ဟာဆိုရင် Season ၈ ခု နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး လူအများနှစ်သက် သဘောကျတဲ့ TV show ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ၂၀၁၃ မှာ သူ့ရဲ့ Spinoff လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကောင် တစ်ခုပေါ် အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားသော The Originals ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်…
A Girl & Three Sweethearts ( 2016 )
Original Title – Sukina Hito ga Iru Koto 2016 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ JDrama လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … A Girl & Three Sweathearts လို့ ခေါ်ပါတယ် … 2016 ရဲ့နွေရာသီမှာ ထုတ်လွင့်ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးငယ်များကို…
The Eternal Love ( 2017 )
ရွီထန်အာဟာရွှီအိမ်​တော်​ရဲ့ကိုယ်​လုပ်​​တော်​က​မွေးထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကံကောင်းစွာနှင့်​ဧကရာဇ်​နိုင်ငံတော်​ကြီးရဲ့မင်းသား၈ မိုလျန်​ချန်​နှင့်​လက်​ဆက်​ထိမ်းမြှားခွင့်​ရခဲ့တယ် ​ ဒါ​ပေမယ့်​ရွှီထန်အာကြိုက်နေတာကမိုရီဟိုက်​(မင်းသား၁-​မိုလျန်​ချန်​အစ်​ကို​တော်​)နှင့်​ဖြစ်ပြီး​ပြီး မင်းသား၁နဲ့လက်​မထပ်​ခဲ့လို့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို​သေ​ကြောင်းကြံခဲ့တယ် ​ ဒါ​ပေမယ့်​အဲ့အချိန်​မှာထူးကြယ်​ဆန်းပြားလှတဲ့အချိန်​အ​ပြောင်းအလဲဖြစ်​ပြီးသူမဟာစရိုက်​နှစ်​မျိုးဖြစ်​လာခဲ့တယ် ရွှီထန်​အာရဲ့ကိုယ်​၀ိဥာဉ်​မှာ အခု​ခေတ်​(2017​ပေါ့​နော်​)ရဲ့ဝိဥာ​ဉ်​တစ်​ခုကရွှီထျန်​အာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်​မှာဝင်​​ရောက်​​နေပြီး ၀ိဥာဉ်​၂ခုဖြစ်​​နေတယ်​ ​ အဲ့​ပြောင်းလဲမှု​တွေကိုစတင်သတိပြုမိတာက​တော့သူမရဲ့အ​စေခံမ​လေး ကျင်​ရှင်း​ပေါ့ ရွှီထျန်​အာရဲ့ကိုယ်​မှာဝင်​​ရောက်​​နေတဲ့ဝိဥာဉ်​ကလည်းအနာဂတ်​ကိုပြန်​သွားနိုင်​မလား မင်းသားမိုလျန်​ချန်​ကလည်း ရွှီထျန်အာရဲ့ ​ပြောင်းလဲမှု​တွေကိုသတိထားမိလာတဲ့အခါမှာ​တော့ ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​မလဲ သူတို့၂​ယောက်​က​ကော​ပေါင်းဖက်​နိုင်​မှာလားဆိုတာThe Eternal Love series ​လေးမှကြည့်​ကြပါလို့ CAST : Xing Zhao…
When Time Stopped ( 2018 )
F4 ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးလားခဲ့တဲ့ Kim Hyun Joong က အခု ကိုရီးယား Drama လောကနဲ့ တော်တော်ကြာ ကင်းကွာနေပြီးမှ ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်…. ဇာတ်လမ်း အညွှန်းလေးကတော့ လူသားတွေကို ဖွားမြင်တဲ့ အချိန် နတ်ဘုရားတွေဆီကနေ အစွမ်းတစ်ချိုး ရရှိပြီး ဖွားမြင်လာကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်… အစွမ်းမျိုးစုံ ရှိတဲ့ အထဲက အချိန်ကို ရပ်တန့်…
The Eternal Love S2 ( 2018 )
S2လေးမစခင် S1လေးနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော် S1ကိုလည်းပြန်တင်ပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်နော် S1မှာ ရွှီထန်အာဟာရွှီအိမ်​​တော်​ရဲ့ကိုယ်​လုပ်​​တော်​က​မွေးထားတဲ့မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး ကံ​ကောင်းစွာနှင့်​ဧကရာဇ်​နိုင်​ငံ​တော်​ကြီးရဲ့မင်းသား၈ မိုလျန်​ချန်​နှင့်​လက်​ဆက်​ထိမ်းမြှားခွင့်​ရခဲ့တယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ရွှီထန်​အာကြိုက်နေတာက မိုရီဟိုက်​(မင်းသား၁-​မိုလျန်​ချန်​အစ်​ကို​တော်​) မိုရီဟိုက်နဲ့လက်​မထပ်​ရလို့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို​သေ​ကြောင်းကြံခဲ့တယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​အဲ့အချိန်​မှာထူးကြယ်​ဆန်းပြားလှတဲ့အချိန်​အ​ပြောင်းအလဲဖြစ်​ပြီးသူမဟာစရိုက်​နှစ်​မျိုးဖြစ်​လာခဲ့တယ်​ ဘယ်လိုပြောင်းလဲတာလဲဆိုတော့ထန်အာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ (2017မှာနေထိုင်နေတဲ့ ထန်အာဝိဥာဉ် ​ပေါ့​နော်​)ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်​မှာဝင်​​ရောက်​​နေပြီး ၀ိဥာဉ်​၂ခုဖြစ်​​နေတယ်​ ဒါပေမယ့် ထန်အာရဲ့ချစ်စရာအပြူအမူလေးတွေကြောင့်မိုလျန်ချန် ကထန်အာတဖြည်းဖြည်းချစ်မိလာခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင်ကိုနှိမ်နင်းရင်း S1မှာသူတို့၂ယောက်ကွဲကွာခဲ့ရတယ် ဒါပေမယ့်အခုဆို အားလုံးစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ Eternal love season2ထွက်ရှိပါလာခဲ့ပါပြီ။ season1မှာ မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင်ကို…